I-Casa Palmeras (Okuqashwayo Komndeni Kuphela) - I-Airbnb
I-Casa Palmeras (Okuqashwayo Komndeni Kuphela)
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Bárbara
U-Bárbara Ungumbungazi ovelele
Uzobe uhlala endaweni yokuphumula enhle enezingadi ezinemibala egcwele kanye nezikhala zokuphumula kwakho okuzokuvumela ukuba ujabulele isimo sezulu esiyingqayizivele sendawo esogwini. Uzokwazi ukufinyelela olwandle ngamamitha angama-350 ukusuka endaweni yokuhlala. Sikumema ukuthi uvakashele indlu ethokomele futhi ephephile ukuze ukuhlala kwakho kube mnandi.
Esikhaleni esikhulu uzoba negumbi lokudlela elibanzi kanye negumbi langaphakathi elinethelevishini kanye ne-air conditioning. Engadini kukhona ipulazi elinendawo yokuphumula engaphandle kanye negumbi lokudlela. Uzokwazi nokufinyelela endaweni ukuze ulungise ukudla okuthosiwe. Indawo yokupaka yangaphakathi eyezimoto ezimbili, kodwa ungakwazi ukupaka ezinye ezimbili ngaphambili, i-condominium inezokuphepha.
4.99 · 82 okushiwo abanye
Ungangithinta nge-WhatsApp ukuze ngikusize uxazulule noma yimiphi imibuzo noma izimo eziphuthumayo ezingase ziphakame ngesikhathi sokuhlala kwakho.
UBárbara Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Puerto San José namaphethelo